Teny iantsoana ny sinagoga
Ny teny hoe sinagoga (misy koa ny manoratra hoe synagoga) dia fanagasiana ny teny grika hoe Συναγωγή / Sunagôgê izay midika hoe "fiangonana" "fivoriana", izay fandikana grika ny teny hebreo hoe בית כנסת / beit kneset izay midika hoe "trano fivoriana" na "trano fiangonana" na בית תפילה‬ / bet tefila "trano fivavahana". Amin'ny teny idisy dia atao hoe : שול / shul, fa amin'ny teny teny ladino dia אסנוגה / esnoga na קהל / kahal.
Ny sinagoga araka ny literatiora
Ao amin'ny Testamenta Taloha
Na ny teny na ny hevitry ny hoe "sinagoga" dia tsy hita ao amin'ny Pentateoka na Torah (na dia milaza ny lovantsofin'ny Raby sy i Filo avy any Aleksandria ary i Flavio Josefa fa ny sinagoga dia efa nisy tamin'ny andron'i Mosesy). Tsy voaresaka ao ihany koa ny amin'ny fiaraha-mivavaka, ka ny toeram-panaovana fanompoam-pivavahana voaresaka ao dia ny Tabernakely, izay fitoerana masina azo enti-mandehandeha sy mirakitra ny Fiaran'ny Fanekana ao amin'ny efitra atao hoe "masina indrindra". Io Fiaran'ny Fanekena io dia napetraka tao amin'ny Tempolin'i Solomona koa izay namboarina hitehirizana azy maharitra.
Ny firesahana voalohany ny amin'ny fivoriam-pivavahana ivelan'ny Tempoly dia hita ao amin'ny Bokin'i Isaia (Is. 8.16): vondron'ny mpianatra nivory niaraka tamin'ny mpaminany Isaia mba hihaino ny tenin'Andriamanitra sy ny Torah. Izany koa no miseho ao amin'ny Bokin'i Ezekiela (Ezek. 8.1) izay ahitana ny loholona ao Joda mivory ao an-tranon'i Ezekiela. Ny Salamo 74.8 izay dangamba nosoratana tamin'ny fahababoana voalohany, dia milaza ny amin'ny ivotoerana atokana ho an'Andriamanitra ao amin'ny firenena.
Araka ny Mishnah
Mety azo heverina ny nitomboan'ny sinagoga isa taorian'ny nandravana ny Tempoly faharoa: araka ny lovantsofin'ny raby voarakitra ao amin'ny Mishnah (hebreo: משנה) (nangonina tamin'ny taona 200 eo ho eo, maherin'ny taonjato iray taorian'ny nandravana ny Tempoly faharoa), dia tsy maintsy ahitana batlanim folo farafahakeliny ny tanan-dehibe iray, fa raha tsy izany dia tanàna madinika izy; ny batlan dia olona niala tamin'ny asa aman-draharahany mba hanokana ny androny amin'ny fivavahana. Ny Mishnah dia mampianatra fa misy sinagoga amin'ny toerana rehetra izay ahitana minyan izay afaka mivory na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona mba hivavaka raha misy lehilahy folo fara-fahakeliny.
Ao amin'ny Testamenta Vaovao
Ny Asan'ny Apostoly dia manambara koa fa ny sinagoga hita isan-tanàna dia efa nisy teo hatramin'ny taona maro (Asa 15.21), sady mitanisa sinagoga maro, ka ny sasany an'ireo olona afaka, ny sasany an'ny Kireniana ary ny hafa an'ireo Aleksandrina. Ny Talmud dia miresaka ny amin'ny sinagoga maro tany Mesopotamia, ka isan'izany ny tao Nehardea, ary sinagoga mihoatra ny 400 tao Jerosalema talohan'ny nandravana ny Tempoly faharoa, nefa ireo Evanjely dia miresaka ny amin'ny sinagogan'i Nazareta (Matio 13.54; Marka 6.2; Lioka 4.16) sy ny an'i Kapernahoma (Marka 1.21; Lioka 7.5; Joany 6.59). Nitoriteny tao amin'ireo sinagoga tao Damaskosy (Asa 9.20) sy tao Salamina any Kiprosy (Asa 13.5) sy tao Antiokia (Asa 13.14) sns i Paoly.
Ny faharavan'ny Tempoly faharoa dia nampitombo ny lanjan'ny sinagoga, satria tao amin'izy ireo no nanohizana ny fomba fanao tao amin'ny Tempoly afa-tsy ny fanaovana sorona, ary tao koa no afaka mivory ny minyan izay ahitana lehilahy folo. Nihamaro noho izany ny sinagoga tany am-pielezana. Ny sinagogan'i Aleksandria resahina ao amin'ny Talmud dia lehibe dia lehibe satria ny manoro ny mpiangona amin'ny alalan'ny fanofahofana lamba ny mpihira rehefa hampanonona ny "Amen".
Ny Epistily nosoratan'i Jakoba na Epistola nosoratan'i Masindahy Jakoba na Taratasy nosoratan'i Masindahy Jakoba dia boky ao amin'ny Testamenta Vaovao ao amin'ny Baiboly kristiana izay isan'ireo atao hoe epistily. Mitonon-tena ho i Jakoba ny mpanoratra azy ary nosoratany "ho an'ny foko roa ambin'ny folo" izany. Isan'ireo atao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an'ny fiangonana sy ny olona rehetra. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 49 sy 132 no nanoratana azy. Tamin'ny taonjato faha-2 vao nekena ho isan'ny kanonan'ny Baiboly kristiana tanteraka ny Epistilin'i Jakoba na dia efa nampiasain'ny ankamaroan'ny fiangonana kristiana ankapobeny aza izy talohan'izany fotoana izany.
Ny Epistily voalohany ho an'ny Korintiana na Tararasy voalohan'i Masindahy Paoly ho an'ny Kôrintianina dia boky ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ireo atao hoe epistily. Taratasy voalohany nalefan'ny Apostoly Paoly ho an'ny fiangonana kristiana tany Korinto izany. Teo anelanelan'ny taona 50 sy 57 no nanoratany azy.
I Joany na Jaona na Johany dia isan'ireo mpianatr'i Jesoa (na Jesosy) roa ambin'ny folo lahy. Atao hoe Joany zanak'i Zebedio koa izy sady rahalahin'i Jakoba zanak'i Zebedio. Mpanjono ny asany. Misy ny mpandinika mihevitra fa i Joany apostoly dia tsy iza fa i Joany evanjelista ihany. Ao koa anefa ireo mandà izany. Fanampin'izany dia heverin'iretsy farany fa tsy olon-tokana no nanoratra ny Filazantsaran'i Jaona.
Ny jodaisma helenistika dia endriky ny fivavahana jiosy izay vokatry ny fihaonan'ny fivavahana hebreo amin'ny kolontsaina grika izay heverina fa nanomboka tamin'ny nanjakan'i Aleksandra Lehibe. Izany endriky ny jodaisma izany no nipoiran'ny vahoaka jiosy atao hoe Romaniota ary izy koa no nampiditra ny fihetsiketsehan'ny jodaisma miankina amin'ny sinagoga fa tsy amin'ny tempoly tamin'ny Andro Taloha.
ary ny targoma amin'ny amin'ny Salamo, ny Joba, ny Ohabolana, ny targoma dimy atao hoe Megilà, izany hoe "sora-tanana", dia ny Tononkira dia Tononkira, ny Rota, ny Fitomaniana, ny Estera, ny Mpitoriteny (na Eklesiasta), ny Tantara, ary ny fanampin'ny Bokin'i Estera.Atao hoe תרגום / targum ny targoma amin'ny teny hebreo.
Ny teolojia dia taranja na vondron-taranja atao hianarana sy hahalalana ny amin'Andramanitra, na ny amin'ny hoe "andriamanitra", amin'ny alalan'ny fandraisan'anjaran'ny fisainan'olombelona ho enti-manazava sy handaminana bebe kokoa izay zavatra fantatra tamin'ny alalan'ny fanambaràna ka miantefa amin'ny finoana.
Na dia tao amin'ny fivavahana kristiana aza no tena nahafantarana ny fanaovana teolojia dia maro koa ireo fivavahana manao telojia ka isan'izany ny fivavahana silamo sy ny jodaisma. Tsy ny tontolon'ny fivavahana ihany no ahitana teolojia fa ahitana azy koa ny taranja filozofia toy ny sampan-taranja metafizika (dia ilay atao hoe onto-teolojia). Tsy ny finoana rehetra koa tsy akory no manaiky ny fanaovana teolojia fa misy ireo izay mitsipaka an'izany ka mihevitra fa tsy mety hifangaro amin'ny zavatra momba ny finoana na hanampy zavatra hafa tsy araka ny fanambaràna tokony hiantefa amin'ny finoana ny teolojia.
Amin'izao fotoana izao dia maro ny sekoly sy oniversite ianarana teolojia nefa ny sasany dia tsy miankina amin'antokom-pivavahana ka ny mpianatra sy ny mpampianatra ao dia tsy voatery ho olona mino.
Fomba fiasa voasaina no entina manao ny fanakarana ny momba an'Andriamanitra sy ny manodidina azy ao amin'ny teolojia hany ka nisy fotoana tsy niaingan'ny mpanao teolojia tamin'ny Soratra Masina, izay vokatry ny fanambaràna, hanakarana ny tontolon'Andriamanitra fa tamin'ny fisainany irery ihany.